Messi ကို ဘုရားလို့ တငျစားချေါဝျေါခွငျးနဲ့ပကျသကျပွီး ဘောလုံးပရိသတျမြားကို ပုပျရဟနျးမငျးကွီး သတိပေး။ – SoShwe
Home/Sport/Messi ကို ဘုရားလို့ တငျစားချေါဝျေါခွငျးနဲ့ပကျသကျပွီး ဘောလုံးပရိသတျမြားကို ပုပျရဟနျးမငျးကွီး သတိပေး။
Messi ကို ဘုရားလို့ တငျစားချေါဝျေါခွငျးနဲ့ပကျသကျပွီး ဘောလုံးပရိသတျမြားကို ပုပျရဟနျးမငျးကွီး သတိပေး။
admin June 24, 2020	Sport Leaveacomment
ဘာစီလိုနာ ပရိသတျမြားမှ Messi အား “D10S” (စပိနျလို ဘရားကို Dios လို့ချေါပွီး Messi ရဲ့ ကြောနံပါတျဖွဈတဲ့ နံပါတျ ၁၀ ကိုပေါငျးစပျထားခွငျး) လို့ ချေါဆိုခွငျးဟာ ဘာသာရေးအရ တားဆီးပိတျပငျထားခွငျးကို ခြိုးဖောကျရာရောကျတယျဆိုပွီး ဘောလုံးပရိသတျမြားကို ပုပျရဟနျးမငျးကွီး Fransis မှ သတိပေးလိုကျခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။
ပုပျရဟနျးမငျးကွီးမှ “ Messi ဟာ ဘောလုံးလောကမှာ အလှနျတျောပွီး အကောငျးဆုံး ကစားနိုငျတယျဆိုပမေယျ့လညျး သူ့ကို ဘုရားလို့ တငျစားချေါဝျေါနခွေငျးမြိုးတော့ မလုပျသငျ့ဘူး . . . ” ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
ပုပျရဟနျးမငျးကွီးမှ ဘာစီလိုနာအသျငးမှ ဘောလုံးအကြျောအမျောဖွဈတဲ့ မကျဆီကို ဘုရားဆိုပွီး နှိုငျးယှဉျအသုံးပွုနကွေခွငျးကို ခကျြခငျြးရပျတနျ့ဖို့အတှကျ ဘောလုံးပရိသတျတှကေို ပွနျးပွနျးထနျထနျ သတိပေး တာမွဈခဲ့ပါတယျ။
စပိနျ ရုပျသံတဈခုဖွဈတဲ့ La Sexta နဲ့ ပွုလုပျတဲ့ အငျတာဗြူးတဈခုမှာ ပုပျရဟနျးမငျးကွီး ဖရနျစဈမှ “ လကျတှကေ့ကြစြဉျးစားကွညျ့မယျဆိုရငျ မကျဆီဟာ ဘုရားမှမဟုတျတာ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ သူ့ကို ဘုရားနဲ့ တငျစားခိုငျးနှိုငျးတာမြိုးလုပျခွငျးဟာ ဘာသာရေးအရ တားမွဈထားတဲ့ ပွဈမှုကွီးကို ကြူးလှနျနကွေသလိုပါပဲ . . .” ဆိုပွီး ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
Messi ကို ဘုရားလို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ခြင်းနဲ့ပက်သက်ပြီး ဘောလုံးပရိသတ်များကို ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး သတိပေး။
ဘာစီလိုနာ ပရိသတ်များမှ Messi အား “D10S” (စပိန်လို ဘရားကို Dios လို့ခေါ်ပြီး Messi ရဲ့ ကျောနံပါတ်ဖြစ်တဲ့ နံပါတ် ၁၀ ကိုပေါင်းစပ်ထားခြင်း) လို့ ခေါ်ဆိုခြင်းဟာ ဘာသာရေးအရ တားဆီးပိတ်ပင်ထားခြင်းကို ချိုးဖောက်ရာရောက်တယ်ဆိုပြီး ဘောလုံးပရိသတ်များကို ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Fransis မှ သတိပေးလိုက်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးမှ “ Messi ဟာ ဘောလုံးလောကမှာ အလွန်တော်ပြီး အကောင်းဆုံး ကစားနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့်လည်း သူ့ကို ဘုရားလို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်နေခြင်းမျိုးတော့ မလုပ်သင့်ဘူး . . . ” ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးမှ ဘာစီလိုနာအသ်ငးမှ ဘောလုံးအကျော်အမော်ဖြစ်တဲ့ မက်ဆီကို ဘုရားဆိုပြီး နှိုင်းယှဉ်အသုံးပြုနေကြခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့အတွက် ဘောလုံးပရိသတ်တွေကို ပြန်းပြန်းထန်ထန် သတိပေး တာမြစ်ခဲ့ပါတယ်။
စပိန် ရုပ်သံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ La Sexta နဲ့ ပြုလုပ်တဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ်မှ “ လက်တွေ့ကျကျစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် မက်ဆီဟာ ဘုရားမှမဟုတ်တာ။ အဲ့ဒါကြောင့် သူ့ကို ဘုရားနဲ့ တင်စားခိုင်းနှိုင်းတာမျိုးလုပ်ခြင်းဟာ ဘာသာရေးအရ တားမြစ်ထားတဲ့ ပြစ်မှုကြီးကို ကျူးလွန်နေကြသလိုပါပဲ . . .” ဆိုပြီး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Previous သင်ျဘောကုနျးပတျသနျ့ရှငျးရေးအလုပျသမားအဖွဈ လုပျကိုငျခဲ့ဖူးတဲ့ Kate Middleton
Next ပရိသတ်များက သတ်မှတ်ထားသည့် Avengers ဇာတ်ကောင်များရဲ့ စရိုက်အခြေအနေများ။